« Salon du bien-être » eny Mahamasina Isarihana ireo te hahay hikolo vatana
Vidin’ny vary Tsipala Niakatra 50 Ariary ny kapoaka
Manomboka miakatra indray ny vidim-bary eny an-tsena raha toa ka marin-toerana izany nandritra ny herinandro maromaro.
Miverina indray ny aretin-doza Ebola Anisan’ny tandindonin-doza i Madagasikara
Nahatratra 11 000 ny matin’ny aretina Ebola ary 28 000 no narary tany amin’iny faritra Afrika Atsinanana iny ny taona 2014-2016, ka anisan’ny voa mafy ny tao RD Congo,
Hetsika “tagnamaro” fahadimy Nafotaka ny fanadiovana teny Ankatso
Manomboka azon`ny olom-pirenena ny hevitra hampitaina amin`ny hetsika “tagnamaro” izay efa miditra amin`ny andiany fahadimy.
TOBIN’NY ZAZA MADITRA Zazalahy 115 no harenina ao Anjanamasina
Miisa 115 amin’izao ireo zazalahy nania beazina ao amin’ny toby Anjanamasina eny Ambohidratrimo.
Finday avo lenta vaovao 9 karazana Ho hita etsy Analakely sy Soarano
Eo amin' ny sehatry ny toekarena maneran-tany dia maro ireo orinasa fanta-daza izay manavao ny tolotra omeny.
Fiahiana ara-tsosialy CNaPS Hiakatra ho 6 000 ariary ny volan-jaza
Hiakatra ho 6.000 Ariary ny volan-jaza amin’ny volana aogositra ho avy io raha nanomboka nihatra izany ny volana mey lasa teo ary tsy mitsahatra miova ho amin’ny tsara ny fanampiana omen’ny CNaPS ireo mpikambana ao aminy.
Mahavoky - Besarety Tapaka iray andro tontolo ny rano, nijaly ny mponina
Nanomboka ny alarobia tamin’ny 2 ora sy sasany tolakandro, ka hatramin’ny omaly alakamisy dia tapaka tanteraka ny rano teny amin’ny fokontany Mahavoky rehetra iny.
Tanterahina nanomboka omaly etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina haharitra efatra andro ilay hetsika « Salon du bien-être et de developpement personnel » karakarain’ny A&M Group.
Hetsika ara-pahasalamana natao hampivoarana ny maha olona izy io raha tsiahivina ka saika hita ao anatin’ireo tranoheva 30 mandray anjara eny an-toerana avokoa ireo karazana fitsaboana mampiasa ireo akora natoraly mampiavaka antsika eto Madagasikara ankoatra ny torohevitra maro samihafa toy ny fampianarana ny olona handrafitra « lettre de motivation » sy CV hisarihana ny mpampiasa. Fa tsy latsa-danja amin’ireo ny resaka kolo vatana izay zary hataontsika Malagasy sasany ambanin-javatra ankehitriny nefa mampiseho ny maha izy azy ny tena ihany koa. Ireo tanora malagasy latsaky ny 40 taona, hatrany amin’ny 70 % no ezahina hahazo tombontsoa avy amin’izany arahin’ny fanabeazana maro samihafa, raha araka ny fanazavan-dRtoa Masy Anglade, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny A&M Group. Ankoatra izay moa dia hisy ihany koa ny fitiliana maimaimpoana ireo karazan’aretina mety mahazo ny reny sy ny zaza, ny diabeta… izay tena manahirana ny ankamaroan’ny olona ankehitriny tokoa. 3.000 Ar vidim-pidirana, tsy mandoa kosa ireo ankizy latsaky ny folo taona.